अदालतमै भ्रष्टाचार ः तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट ! – KarnaliPost Daily
अदालतमै भ्रष्टाचार ः तीन तलाको भवनमा सात तलाको लिफ्ट !
३० चैत्र २०७४, शुक्रबार ०५:१५ April 14, 2018 by Karnali Post Daily
काठमाडौँ ः बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी, अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)लाई विपन्न, अशक्त परिवारको आवास निर्माण गर्न अनुमति दिएको, तर उनीहरु कार्य्विधिविपरित सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाले कार्य्विधिको अधिनमा रहेर खर्च नगरेको ठहर छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट १५ फागुन ०७४ सम्म पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न २२१ गैरसरकारी संस्थाले ४८ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख ६४ हजार खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । प्राधिकरणको साझेदार संस्थाले करिब ११ हजार व्यक्तिगत तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेपनि खर्चको विवरण नबुझाएको महालेखाले जनाएको छ ।
सुरक्षासम्बन्धी काममा परिचालन गर्ने गरी भर्ना भएका प्रहरीmलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा उनीहरुको व्यक्तिगत काममा लगाउने गरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । सुरक्षा बाहेकका अन्य कार्यमा प्रहरी जवान खटाउने काम रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले सुरक्षाको खतरा मूल्याङ्कन, अवधि, सुरक्षा दिनुपर्ने पदाधिकारी, सुरक्षा चुनौती आदिको विश्लेषण गरेर मात्र पूर्व्विशिष्टको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी खटाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाले सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाउने काम बन्द गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७४ जेठ १८ मा नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न १ अर्ब ६८ करोड निकासा गर्‍यो । नेपाली सेनाले एक वटा मिडियम हेलिकोप्टर खरिद गर्न इटालीको एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार मानि युरो १ करोड ४० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गर्‍यो । उक्त मुल्यमा हेलिकप्टर खरिदको प्रतिस्पर्धा गर्न ६ देशका कम्पनी सूचीकृत भए । सुचीकृत सबै कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेकोमा इटालीको एक कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकोले निजसँग युरो १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २४३ मा खरिद सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्य्विधि, २०६४ ले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा एक मात्र प्रस्ताव पेस भएको र सोही बोलपत्र स्वीकृत भएकोले प्रतिस्पर्धा नभै हेलिकप्टर खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
महालेखाले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । सम्झौता अनुसार नमूनाको रुपमा पेस भएको हाई इनर्जी विस्कुटको गुणस्तर निरन्तर कायम राख्न आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक ४र४ महिनामा स्वदेशस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र विदेशस्थित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने तथा खरिदकर्ताले आवश्यकताअनुसार आकस्मिक गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ । तर हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको आपूर्तिकर्ताले यो वर्ष स्वदेश तथा विदेशको प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस नगरेको एवं कार्यालयले गुणस्तर परीक्षण गराएको छैन । सेनाका लागि आवश्यक हाइ इनर्जी विस्कुट र कण्डेन्स मिल्क आपूर्ति गर्ने गरी उक्त विस्कुट उद्योग र दुग्ध व्यवसायीसँग ३८ करोड ६४ हजार र १६ करोड ९८ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको छ ।